Injabulo enkulu kunayo yonke emhlabeni - babe nezingane futhi ube umama. Lutho uyoke akwazi ukwenza owesifazane ujabule ngaphezu kokuba ingane ozithandayo. Kuyinto ukuthi izingane agule. Lezi zikhathi kukhona okujabulisayo omama, bahlalele ukhathazeke, thandazela ukuba ingane yabo yonke into ihamba kahle. Uma ingane igula kakhulu, futhi wayenedumela imfiva, ungathola usizo ngengane amakhandlela antipyretic. Sebenzisa lezi kumele kube kuphela emva kokubonisana udokotela wezingane noma injongo yayo. Ngakho lokho kuhlukile amakhandlela antipyretic ngoba ingane kumasayiraphu kanye amaphilisi? Futhi kungani ngesikhathi lokushisa Kunconywa kubo?
suppositories ezinjalo ingasetshenziswa Kiddies ngisho engu kulencane. Ziyakwazi namagciwane, izidakamizwa immunomodulatory. Ezinye zazo ziye avunyelwe ngisho izingane kusukela ekuzalweni. Sinenkosi ubuncane contraindications side effects, okusho ukuthi cishe ephephile izingane. Into kuphela ukuthi kungaba - kungcono yokungezwani komzimba. Ngakho-ke, nge ekusetshenzisweni kwamakhandlela izingane abanomzimba ongezwani nezinto ezithile kudingeka uqaphe.
Ethandwa kakhulu kukhona amakhandlela antipyretic izingane, ezinye zazo yilezi acetaminophen, ibuprofen, Panadol. Le mithi asetshenziswa Pediatrics isikhathi eside futhi ziphephile. Ngaphezu kwalokho, amakhandlela hamba kahle ngemithi elwa namagciwane.
Yiziphi amakhandlela izingane
1. Amakhandlela "Panadol"
Siza ekulweni namagciwane, aqukethe ukubunjwa yabo-paracetamol kanye namanye amanxusa elisizayo, Kunconywa izingane ezivela eminyakeni 3.
2. Bheka "Viburkol"
Have izakhiwo eqeda ukuvuvukala, uyoqeda ubuhlungu kanye izinhlungu zibe ngenxa ilungu yabo sedatives ukunqanda ingane. Ingasetshenziselwa kusukela ekuzalweni.
Nikeza izingane nokuvinjelwa Ari no-Ari ehlangana ngemithi elwa namagciwane. Isetshenziswa kusukela ekuzalweni, ngemuva kokuxoxisana udokotela.
4. Umuthi "Nurofen"
Yehlisa izinga lokushisa yokusetshenziswa kusuka 3 izinyanga. Usizo Good yezifo ezibangelwa amagciwane, aqede imfiva emva yokugoma.
5. Ukulungiselela "Tsefekon"
Antipyretic amakhandlela "Tsefekon" izingane eziqukethe zabo Ukwakheka-paracetamol, ngaleyo ndlela ngokushesha ukunciphisa izinga lokushisa kanye okudambisa ubuhlungu ezinganeni. Zingasetshenziswa ku zamazinyo ikhanda, futhi izifo zezingane.
Zonke amakhandlela antipyretic izingane (afundiswe isicelo ngezansi) iqondiswa rectally, okungukuthi ku ingemuva.
Umthamo ebekwe udokotela. Ngokuvamile, ikhandlela elilodwa kwanele. Uma ufuna ukuphinda isingeniso, kungenziwa ngemva kwamahora angu-6. Amakhandlela Bheka "Tsefekon", isibonelo, isetshenziswa ngendlela elandelayo:
Izingane ezivela izinyanga 3 kuya ngonyaka: 1 suppository (0.1 g).
Izingane ngonyaka owodwa futhi kuze kube iminyaka emithathu: 1-2 suppositories (0.1 g).
Izingane ezintathu kuya eminyakeni 10: 1 suppository (0.25 g).
Musa ukhombe izingane zabo nge kucikelela paracetamol no ebukhoneni ukuvuvukala kule ingemuva. ukungaphathwa kahle imithi kuba ezingavamile.
Ungesabi ukusebenzisa antipyretics suppositories ingane. Ngenxa yokuthi izinto zabo abamelwe okusebenzayo kangcono bumuncwa ikholoni kuka e isicelo amaphilisi ingestible noma isiraphu, umphumela kuyoba obonakalayo. Ake encane yakho uyalulama maduze!
Arharova Ekaterina: Biography futhi umlando ngokuphumelelayo nezinkinga zomshado ochithekile